लकडाउनमा खुल्ने बैंककाे दिन, बार तोकियो (विवरणसहित) – Yug Aahwan Daily
लकडाउनमा खुल्ने बैंककाे दिन, बार तोकियो (विवरणसहित)
युग संवाददाता । ७ जेष्ठ २०७७, बुधबार २०:०५ मा प्रकाशित
3892 पटक हेरिएको
कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खुल्ने बारेमा जनगुनासो आएपछि समय तोकिएको छ । कुन बैंक कहिले, कहिले खुल्छ ? भनेर बैंकका कर्मचारी र आम सर्वसाधारण अन्यौल भैरहेको गुनासो आएपछि राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालयले दिन, बार र समय तोकिदिएको हो । सुर्खेतमा प्रादेशिक र शाखा कार्यालय रहेका बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले केन्द्रीय कार्यालयको निर्देशन र सर्कुलर अनुसार कहिले, काँही मात्रै खोल्ने गरेका थिए ।
सुर्खेतमा कार्यक्षेत्र बनाएर शाखा कार्यालय खाेलेका ३५ वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको हप्तामा खुल्ने दिन, बार र समय तोकिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक सुर्खेत कार्यालले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुको हप्तामा खोल्ने दिन, बार तोकेको राष्ट्र बैंक सुर्खेतका कार्यालय प्रमुख डा. शालिकराम पोख्ररेलले जानकारी दिनुभयो । कोरोना नियन्त्रणमा सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन २०७७ जेठ २० गतेसम्म न्यूनतम कर्मचारीहरुको उपस्थितिमा आलोपालो मिलाई सामाजिक दुरी कायम गरी सेवा प्रदान गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिइएको छ ।
सरकारी बै‌क राष्टि्य बाणिज्य बै‌क शाखा कार्यालय सुर्खेतलाइ हप्तामा चार दिन खुल्नेछ भने अन्य निजि बै‌कहरु हप्तामा अनिवार्य २ दिन खुल्ने भएका छन् । राष्ट्र बैंक सुर्खेतले बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरु खुल्ने दिन, बार, मिति तोकेर आवश्यक समन्वय र सहयोगका लागि भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय सुर्खेतलाई पत्र पठाएको छ ।